Fadlan la soco: Dukumentiga Covid-19 Janet Ossebaard (Ninefornews) waa been abuur warar been abuur ah: Martin Vrijland
Filed in NEWS ANALYZES	by Martin Vrijland	on 23 Maarso 2020	• 9 Comments
isha: si buuxda iskuxiran
The Covid-19 Janet Ossebeard (wareegyada dalagga, Ninefornews) dokumentiyada coronavirus (hoos eeg) waa dabin. Waa inaad la socotaa in IBM's Deep Blue supercomputer al ee 1996 Horyaalka adduunka Kasparov oo leh chess iyo Google Alphabet's Kumbuyuutar Kumbuyuutar ah 2016 oo ah horyaal adduunka ugu ciyaarta ugu adag. Orodday inaad garaacdo. Intaa waxaa sii dheer, waa inaad ogaataa in warbaahinta ay awood u leedahay inay soo saarto wax walba, oo ay ku jiraan wax kasta (oo ay ku jiraan aragtiyaha shirqoolka) laftooda.
Waxay wax walba isugu keeni karaan sida filim oo waxay kugu ridi karaan inaad u maleynaysid inay runtii tahay war, si kuwa khiyaanooyinka wararka been abuurka ah sida NuCheck.nl ay u gubi karaan marxalad dambe. Iyada oo la adeegsanayo dhammaan xog aruurinta waaweyn maanta, hoggaamiyeyaasha adduunku way yaqaanaan sida loogu cayaaro dadka inta ugu hooseysa illaa bartilmaameedka minka.
Waxa ugu caqliga badan ee ku saabsan waxaas oo dhami waa inay jiraan wax badan oo run ah xaqiiqda ah in is-abuuray been abuur is-abuur ah ayaa la istcimaalaa, laakiin maxaa yeelay dadku goor dambe waxay la yimaadaan "caddeyn" inay jiraan warar been abuur ah, waxay ilmaha ku tuuri karaan biyaha qubeyska.
Waxaan jecelahay inaan taas kugu iftiimiyo waxaanan kugula talinayaa inaad runtii akhrisid oo qaybiso buuggayga. Ma jiro qof ku tusinaya xeeladaha mucaaradka la xakameynayo. Maaha Ninefornews, Ma DooneeToKnow, Ma Jensen, Aan Niburu, Ma aha Informationwars. Taasi waa sababta oo ah waa khadka ugu dambeeya. Ha ku dhex beerin dhexdeeda! Gudaha maqaalkani iyo buuggayga waxaan si faahfaahsan ugu sharixi doonaa istiraatiijiyaddan mucaaradka ee la xakameeyay.
Halkan ka dhagayso tusaale ah qaabka ugu dambeeya: voorbeeld
Qoraalkan ka metro.co.uk Eeg sida fiidiyowgaas Janet Ossebaard loogu dhawaaqi doono war been abuur ah.
Raaligelintaada, ma doonayo inaan noqdo qiso iyo caqli badan, laakiin waxaan shaqadeyda ka joojiyay wax ka badan XNUMX sano ka hor sababtoo ah waxaan ka xanaaqay beenta ka jirta warbaahinta. Waqtigaas, tusaale ahaan, waxaan wali aaminsanahay Alex Jones 'infowars oo waxaan ku dhammaaday wareegga warbaahinta kale. Markaa waxaan ka dhex ogaan karayay gudaha in dhammaantood aysan aad ugu faraxsanayn digaagkan qariibka ah ee qaniinyada (eeg sharaxaad).
U fiirso oo ha u dhicin shabagyada amniga iyo dagaalyahannada qaanso-roobaadka ee xakameysan (eeg buuggayga sharaxaad dheeri ah, si kastaba ha noqotee gaar ahaan taxanahan).
Maalmihii la soo dhaafay, fiidiyowyo badan ayaa la ii soo diray si ay ii xayiraan oo igu dhiirrigeliyaan inaan dhajiyo farriimaha noocan oo kale oo lagu sumadayn karo warar been abuur ah; lagana yaabo inay isku dayaan inay madow ku galaan goobtayda. Marka waa inaad runti feejignaadaan oo aad noqotaan kuwa dhaliila. Buuggayga ayaan ku sharaxayaa sida loogu tago isha kaliya ee saxda ah ee macluumaadka (asalkaagii) iyo sida aan ula tacaali karno nidaamkan fayras.
"Sida ugu wanaagsan ee loo xakameeyo mucaaradka waa inaad adigu hogaamiso naftaada", Vladimir Lenin
Soodhawrka xiriiriya: destentor.nl, sagaal bog, wikipedia.org bbc.com
Bill Gates 'tirada xaddiga' kaarka aqoonsiga bilaa-waayirka ah ee isha ku haya inaad qabtid cudurka 'coronavirus' iyo haddii lagu tallaalay iyo in kale.
Sababtoo ah Ole Dammegard waa hanti weyn ee warbaahinta kale
Sababta naloo siiyay shabakadda badbaadada 911 dadka sida George van Houts
Martin Vrijland ma yahay koox mucaarad ah? Maya: Akhri halkan sababta aysan ahayn kiiska!
Tags: beddelaad, biyaha qubeyska, goobta shirqoolka, aragtida shirqoolka, aragtiyaha shirqoolka, la xakamey, coronavirus, Covid-19, documentary, been abuur ah, featured, Janet, nooc, warbaahinta, wararka been abuur ah, news, sagaalka sagaal bilood, kasoo horjeedka, Caano-gadhka, valcabal.nl, dabin
23 Maarso 2020 at 23: 25
Tusaale ahaan, ma runbaa aamminsan tahay in Robert Jensen uu yahay mucaarad dhab ah? Wuxuu sameeyaa fiidiyowyo wanaagsan! Yaad u maleyneysaa in uu isagu u shaqaaleysiinayo bandhiggiisa? Taasi (General Agency Press Agency) John de Mol laga yaabee?
Runtii hurdada ka kac… shabagyadooda badbaadada: safka ugu dambeeya
Ugu dambeyntiina waxaa looga tirtiray fadeexad si ay u soo jiidaan shabaqa badbaadada ee buuxa - kuwa raacsan iyo dhammaan - foornada dabka.
Isbeddelka dhabta ahi kama yimaado ragga iyo dumarka ka dambeeya kamarad! Taasi waxay kaa ilaalinaysaa khayaarka inay kuu diyaarin doonaan adiga. Isbeddelka REAL wuxuu ku bilowdaa adiga oo firfircoon naftaada!
23 Maarso 2020 at 23: 45
Sideed ula hadlaysaa dadka sida inay daawanayaan Teletubbies-ka. Sesame Street!… Pffff jooji isku darka runtaan aan micno lahayn! "Cabal", "Trump Badbaadiyaha," "Q" ("waa kuu wanaagsan adiga)", iyo inbadan oo ka mid ah aragtiyaha badbaadada ee shabaqa.
Madam si qarsoodi ah ayey u gudbisaa fikradda shuuciyadda!
Trump maahan badbaadiye! Dib-u-dejinta maaliyadeed ee loogu magac daray 'goobaabinta dalagga' Madam si wanaagsan ayaa loo qorsheeyay loona soo bandhigayaa waxa hadda indhahaaga ka soo baxaya, iyada oo Trump hoodhka ku jiro. Khariidadda wadada loo maro wadaaga farsamo-wadareedka (wadaaga guud) “Gobolka Badbaadada” .. waxaa hormariyey 'goobada dalagga' Jannet Ossebaard. Farsamada farsamada: waxaa xakameeya tikniyoolajiyadda..AI so..big data: Qaabka Shiinaha ee shuuciga wadaaga teknoolojiyadda! Wadaag wadaaga bulshada wadaaga ah! Taasi waa waxa ay haweeneydan dhiirrigelineyso!
24 Maarso 2020 at 00: 20
Hey John de Mol: Diewertje Blok waxay ahaan laheyd doorashada ka fiican istaraatiijiyaddan shabakadda amniga….
24 Maarso 2020 at 00: 35
Quote (9:30 min.): "Haddii ay jirto gebi ahaanba xidhitaankii warbaahinta bulshada, ha ka baqin maxaa yeelay howlgalka Defender 2020 waxaa loo diray si loo xiro dawladaha musuqmaasuqa ah"
Maya 'goobaabinta dalagga' ... waxaa loo adeegsan doonaa in dadka laga joojiyo inay midba midka kale la xiriiro, si uusan uga hor imaan xukunkiisa ugu dambeeya.
24 Maarso 2020 at 01: 15
Shill Micha Kat wuxuu soo bandhigayaa isla sheekada badbaadada ee Q Anon
24 Maarso 2020 at 11: 49
Wadarta waalan. Oo aqriyaa faallooyinka hoose, waxay sidoo kale garaacaan xarig, xariiq iyo saxanka. Dabcan waxay jeclaan lahaayeen inay rumeystaan ​​farriin wanaagsan.
Walaalka weyn wuxuu naga badbaadin doonaa kuwa xun xun, Jacayl walaal weyn, aamina walaal weyn, aamina Trump, aamina ciidanka. Amar cusub oo jacayl nabadeed iyo wada noolaansho ayaa soo bixi doona
Waxay ku toosi doonaan hab xun markii ay goor dambe tahay.
Wadanka Mareeykanka, sidookale, hada waxaad heysataa qof waali ah oo wacdiya noocaas. Xarkaha ayaa na badbaadin doona, shisheeyaha ayaa na badbaadin doona, Trump ayaa na badbaadin doona, ciidanka ayaa na badbaadin doona.
24 Maarso 2020 at 12: 29
Jawaab celinno badan oo luul ayaa ka hooseysa muuqaalkan (covid19 part 3). Fiiri xisaabaadka qaarkood oo ka dambeeya faallooyinka. Intooda badani waxay leeyihiin isla fiidiyowyada youtube-ka iyo 1 ama 2 macaamiilleyaal. Xisaabaadka YouTube-ka ee layaabka leh waxay u egyihiin xisaab xumo ama waxaa abuuray dhowr qof oo isku dad ah
24 Maarso 2020 at 12: 33
Waxaa ka buuxa xisaab xumo, xisaab qoto dheer oo been abuur ah iyo borotokoo AI ah oo ka jawaabaya warbaahinta bulshada. Kama sii qaadi kartid jawaabaha kanaalka warbaahinnada bulshada ee waaweyn si dhab ah oo xitaa waad iska indha tiri kartaa.
24 Maarso 2020 at 16: 43
« Bill Gates 'tirada xaddiga' kaarka aqoonsiga bilaa-waayirka ah ee isha ku haya inaad qabtid cudurka 'coronavirus' iyo haddii lagu tallaalay iyo in kale.
Cusbooneysiinta xirida 'Coronavirus covid-19': Markaad toostid oo aad ogaato inaad ku jirtid, maxaad sameyn kartaa? »
Guud ahaan Wadarta: 1.202.503